Ojiji eth0 na LMDE | Site na Linux
Jigharia eth0 na LMDE
Ndị ọrụ nke LMDE Nwere ike izute ọnọdụ dị oke egwu na nhazi nke kaadị netwọk.
Nọmalị ndabara netwọk interface na Debian, Ubuntu na ndị ọzọ, bụ eth0, ma mgbe ị na wụnye LMDE ọnụ ọgụgụ a na-agba wee ghọọ eth1. N'okwu m, enwere m kaadị ntanetị 2, eth0 y eth1, ha na-aghọ eth1 y eth2 otu.
Amalitere m ịchọ ya na azịza m chọtara maka nke a bụ iwepu ngwugwu dnet-nkịtị ọ bụrụ na arụnyere.
Anyị na-agbanyeghachi na ihe niile kwesịrị ịrụ ọrụ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Jigharia eth0 na LMDE
Ndewo Elav. Emere m, enwetaghachi, mana ọ nọgidere na-egosi "Nchekwa onwe eth1". Enweghị ụzọ, ọ naghị emetụta m maka naanị m nwere kaadị netwọkụ.
Mmm wee dị egwu. Ọ rụụrụ m ọrụ .. agbanyeghị ..
Ọ bụ ihe ùgwù ịnụ ụtọ ihe ọmụma ịchọrọ ịgbasa na ịkekọrịta. Ezigbo ọrụ.
Enyochare m ma ọ bụrụ na arụnyere ngwungwu dnet-na ndabara na LMDE - ọ nọchiri Ubuntu Lucid na kọmputa m n'oge na-adịbeghị anya - na, ọ bụghị, kama, interface ntanetị nwere eriri dị ka eth1 na njikwa m (Network Manager) 0.8.4)
Zaghachi ka quique
Debian 7 (Wheezy) ga-enwe ọtụtụ ije
Na ọnụ ya: Iwu ndị bụ isi na GNU / Linux